A Short Documentary of Myanmar's Director; Movie - Story of Khiam; Movie about the culture of Naga People
A short documentary of Myanmar's director
မနက်ဖြန် သြဂုတ်လ ၁၀ရက် ( ကြာသပတေးနေ့ ) တိုကျိုအမျိုးသားအနုပညာပြတိုက်မှာ မြန်မာလူမျိုး ဒါရိုက်တာရဲ့ ဖန်တီးမှုလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တို ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများကြီး လာကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Tomorrow, on August 10th (Tree), the short documentary of Myanmar's director is screened at the National Museum of new art in Tokyo. I'd like to seealot of people.
‘Story of Khiam’ Movie
သြဂုတ်လ ၁၈ရက် ( သောကြာနေ့ ) ညနေ ၆နာရီကနေ ၈နာရီအထိ နာဂလူမျိုးတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အုန်းမောင်း တည်ဆောက်ပုံကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ " Story of Khiam " ရုပ်ရှင်ပြသပြီး " မြန်မာ့ရိုးရာဂီတအကြောင်း " Lecture ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လာကြည့်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
8月18日（金）18：00－20：00、ナガ族の巨大木鼓制作を撮影した「Story of Khiam」の上映と「ミャンマー伝統音楽について」の講演をおこないます。みなさまのお越しをお待ちしています。
နာဂလူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ အရှည် ၁၀မီတာကျော်တဲ့ အုန်းမောင်း ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဂျပန်လူမျိုး အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာ Mr. Hiroshi IGUCHI မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ သစ်တောတွေထဲအထိ ဝင်ရောက်ပြီး ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်း ကို ၁နာရီကြာ ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ Mr. Iguchi က ရိုက်ကူးရေးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပတ် သက်ပြီး စကားပြောမှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာ တက္ကသိုလ် ( ရန်ကုန် ) ဂီတဌာနမှ ဌာနမှူး ဆရာ ဓီရာမိုရ် မှ အနောက်တိုင်းဂီတ နဲ့ မြန်မာ့ဂီတရဲ့ ကွာခြားပုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုအလိုက် ကွဲပြားတဲ့ အသံအရင်းအမြစ်များကို နားထောင်းရင်း ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ ဓီရာမိုရ် က ဂျပန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့ပြီး မြန်မာဂီတအကယ်ဒမီဆု ၂ဆု ရရှိထားတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်ပြီး မသိကြသေးတဲ့ နာဂလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းမှာ ကြည့်ပြီး Mr. Iguchi နဲ့ ဆရာ ဓီရာမိုရ် တို့ရဲ့စကားကို တိုုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်မယ့် နှစ်ခါမရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်တာကြောင့် လက်လွှတ်မခံကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းနဲ့ Lecture ကို ဂျပန်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ပါမယ်။
18：00-19:00 「Story of Khiam」ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းပြသခြင်း
19:00-20:00 Mr. Iguchi နှင့် ဆရာဓီရာမိုရ်တို့မှ မြန်မာရိုးရာဂီတအကြောင်း Lectrue ပေးခြင်း
ပုလဲကွန်ဒိုသို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းကသွားတဲ့ ဘတ်စ်ကား စီးလာပါ။
ကုက္ကိုင်းမှတ်တိုင်နဲ့ ဟာမစ်တစ်မှတ်တိုင် ကြားမှာ ရှိပါတယ်။
အားလုံး လာရောက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ナガ族に古くから伝わる全長10メートルを超える超巨大木鼓の制作過程を日本人サウンドエンジニアの井口寛氏がサガイン地域の森の中に入り、映像に記録されました。その貴重な映像「Story of Khiam」を約１時間鑑賞します。後半は、井口氏から撮影秘話をお聞きし、またDiramore・ヤンゴン文化芸術大学・音楽学科長に加わっていただき「ミャンマーの伝統音楽について」と題して、西洋音楽とミャンマー音楽の違い、またミャンマーの多様な民族性をおびた音楽について音源を聞きながら解説してもらいます。Diramore氏は日本に留学した方で、ミャンマーのアカデミー賞（映画音楽部門）で2度受賞されている著名な方です。
18:00-19:00 映像上映「Story of Khiam」
Movie about the culture of Naga People
On coming August 18 (Friday), there will be holdingamovie about the culture of Naga People and their process of makingaNaga Traditional Huge Slit Drum,alecture of Myanmar Traditional Music in both Japanese & Myanmar language. Please understand that there will be no translation in English.
သြဂုတ်လ ၁၈ရက် ( သောကြာနေ့ )မှာ နာဂလူမျိုးစုရဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ ကြီးမားသော အုန်းမောင်းပြုလုပ်ပုံ ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်း ပြသခြင်းနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာဂီတအကြောင်း Lecture ကို ဂျပန်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာတို့နဲ့ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမပါဝင်တာကို နားလည်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
နာဂလူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ အရှည် ၁၀မီတာကျော်တဲ့ အုန်းမောင်း ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဂျပန်လူမျိုး အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာ Mr. Hiroshi IGUCHI မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ သစ်တောတွေထဲအထိ ဝင်ရောက်ပြီး ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းကို ၁နာရီကြာ ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ Mr. Iguchi က ရိုက်ကူးရေးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စကားပြောမှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာ တက္ကသိုလ် ( ရန်ကုန် ) ဂီတဌာနမှ ဌာနမှူး ဆရာ ဓီရာမိုရ် မှ အနောက်တိုင်းဂီတ နဲ့ မြန်မာ့ဂီတရဲ့ ကွာခြားပုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုအလိုက် ကွဲပြားတဲ့ အသံအရင်းအမြစ်များကို နားထောင်းရင်း ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ ဓီရာမိုရ် က ဂျပန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့ပြီး မြန်မာဂီတအကယ်ဒမီဆု ၂ဆု ရရှိထားတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်ပြီး မသိကြသေးတဲ့ နာဂလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းမှာ ကြည့်ပြီး Mr. Iguchi နဲ့ ဆရာ ဓီရာမိုရ် တို့ရဲ့စကားကို တိုုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်မယ့် နှစ်ခါမရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်တာကြောင့် လက်လွှတ်မခံကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။